अफ्रिकाबाट यसपालि युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया पुगेको मंकिपक्स भाइरस :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
अफ्रिकाबाट यसपालि युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया पुगेको मंकिपक्स भाइरस
काठमाडौं, जेठ ९
साढे दुई वर्षदेखि कोरोनाभाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका संसारभरिका मान्छेका कान अहिले एउटा अर्को संक्रामक रोगको नाम सुनेर ठाडा भएका छन्।
केही दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा मंकिपक्स नामक भाइरसको चर्चा हुन थालेको छ।
झन्डै ६५ वर्षअघि पत्ता लागेको यो भाइरस अहिले एकाएक संसारका १३ देशमा पुगेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकिपक्सको यो फैलावटले जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै चनाखो हुनुपर्ने बताएको छ।
अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पुगेको यो भाइरस नेपाल पनि आउन सक्नेबारे स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
सन् १९५८ मा अनुसन्धानका लागि राखिएका बाँदरहरूमा पहिलो पटक देखिएकाले यो भाइरसको नाम मंकिपक्स राखिएको हो। सन् १९७० मा डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा पहिलो पटक एक जना बालकमा यो भाइरस देखिएको थियो।
त्यसपछि यो रोग मध्य तथा पश्चिम अफ्रिकाका बेनिन, क्यामरून, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कंगो, गाबोन, घाना, आइभोरी कोस्ट, लाइबेरिया, नाइजेरिया, रिपब्लिक अफ द कंगो, सिरालियोन र दक्षिण सुडानमा बेला-बेलामा देखिने गरेको थियो।
यसअघि पनि ती मुलुकमा गएका बाहिरका मानिसलाई पनि बेला-बेला यो भाइरसको संक्रमण हुन्थ्यो। अहिलेजति एकै पटक यति धेरै मुलुकमा यो भाइरस यसअघि कहिल्यै फेला परेको थिएन। बेलायत र अमेरिकाका संक्रमितहरू मध्य तथा पश्चिम अफ्रिकाका ती मुलुकमा नगए पनि उनीहरूमा संक्रमण देखिएको हुनाले स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यो चनाखो हुनुपर्ने विषय भएको बताएका छन्।
अहिले यो भाइरस अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, स्पेन, स्विडेन, बेलायत, अमेरिका र इजरायलमा फेला परिसकेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मंकिपक्सको संक्रमण भएपछि ज्वरो आउने, टाउको, मांसपेशी र मेरूदण्ड दुख्ने, थकान महशुस हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन्। शरीरका विभिन्न भागमा बिबिरा आउने र ती फोका बन्ने यसको अर्को मुख्य लक्षण हो। यी लक्षण गम्भीर खालका भने हुँदैनन्।
संक्रमितलाई निको हुन ६ देखि १३ दिनसम्म लाग्छ। कसैलाई निको हुने २१ दिनसम्म लाग्न सक्छ।
मंकिपक्सको छुट्टै उपचार छैन। चिकित्सकहरूले स्मलपक्सको खोप लगाएका मानिसमा मंकिपक्सको संक्रमणसँग लड्ने एन्टीबडी बनिसकेको हुने बताएका छन्। संक्रमितहरूलाई डाक्टरले अवस्था हेरेर उपचार सिफारिस गर्छन्। बच्चा र गर्भवती महिलालाई संक्रमण भए अरूभन्दा बढी गाह्रो हुन सक्छ।
मंकिपक्सको मृत्युदर न्यून छ। नाइजेरियामा अहिलेसम्मको तथ्यांकमा संक्रमितमध्ये ३.३ प्रतिशतले ज्यान गुमाएका छन्।
मंकिपक्स संक्रमित व्यक्तिको फोका फुटेको छालासँग सम्पर्कमा आउँदा सर्न सक्छ। र्‍याल, थुकका छिटाजस्ता तरल पदार्थबाट पनि यो सर्न देखिएको छ। अहिलेका केही संक्रमितमा यौनसम्पर्कका माध्यमबाट पनि यो भाइरस सरेको देखिएको छ।
(न्युयोर्क टाइम्सलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका विवरणमा आधारित।)
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ९, २०७९, ०७:०४:००
बुढीगण्डकी बनाउन कम्पनी स्थापना गरिने, यस्तो छ सेयर संरचना
ऊ पत्नीपीडित कि उनी पतिपीडित?
बुढीगण्डकी बनाउन कम्पनी खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
आज पार्टी शिलान्यास गरेँ, उद्घाटन गर्ने बेला नेपाल चकित हुनेछ: वामदेव गौतम
देशभरिका कारागारमा रहेका कैदी तथा थुनुवालाई रंगिन परिचय पत्र दिइने
बजेट छलफलमा प्रदेश १ सांसदको गीत - सोइ ढोले सोइ, मुख्यमन्त्री खोइ (भिडिओ)
चितवन निकुञ्जले 'खुंखार गैंडा सिकारी' मानेको रामकुमार प्रजा १२ वर्षपछि समातिए
वामदेव गौतमले भने- मेरो श्रीमती र छोरा भएर मात्रै केन्द्रीय सदस्य भएका होइनन्
गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुईको मृत्यु
शिवसताक्षी नगरले बाढी विस्थापित परिवारलाई सामूहिक रूपमा खाना खुवाउने (तस्बिरहरू)
काठमाडौं महानगरमा सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध
बाढी र डुबानका कारण विराटनगरका विद्यालय तीन दिन बन्द गरिने
डाक्टर कुटपिट प्रकरण: ट्राफिक चेकिङमा बसेका असईसहित पाँच जना तानिए बग्गीखाना
आफ्नै स्कुल बसले ठक्कर दिँदा चार वर्षका बालकको मृत्यु
को हौ तिमी मेरो? अन्जना भट्टराई
मलाई सम्झना छ! प्रेना भुसाल
पृथ्वी एक मात्र प्रज्ञानी नारायण र स्मारिका भट्ट